Kutanga Nyoro - Jiangsu Runau Electronics Kugadzira Co, Ltd.
Simba Magetsi Midziyo YeSoft Starter
Imwe neimwe ma thyristors akafanana akabatanidzwazve reathristors matanhatu kana matatu MTX thyristor magetsi ma module ekunyora matatu-chikamu magetsi gadziriso, uye nekuibatanidza iyo pakati pesimba remagetsi uye mota stator.
Semuenzaniso wetatu-chikamu chakazara chinodzorwa bhiriji gadziriso redunhu, kana uchishandisa nyoro yekutanga kuti utange mota, iyo inobuda voltage ye thyristor inowedzera zvishoma, uye mota zvishoma nezvishoma inomhanyisa kudzamara thyristor yaitwa zvizere. Iyo mota inoshanda pane echimakanika maficha eakavhenekerwa magetsi kuti awane kumeso kutanga, kudzikisira kutanga kwazvino, uye kudzivirira kutanga pamusoro parwendo rwezvino. Kana mota ikasvika pane yakatarwa kumhanya, yekutanga nzira inopera, uye nyoro inotangisa inotsiva iyo thyristor neyambuka contactor kuti ipe yakatarwa voltage yeyakajairika mashandiro emota kudzora kupisa kwekushisa kwe thyristor uye kuwedzera hupenyu hwebasa iyo nyoro nyowani, kugadzirisa kunoshanda kushanda uye kudzivirira harmonic kusvibiswa kune simba gridhi.
Iyo nyoro nyowani inogona zvakare kupa yakapfava yekumira basa iyo inopesana neyaka nyoro kutanga maitiro. Iyo voltage zvishoma nezvishoma inoderera uye kumhanya zvishoma nezvishoma kunodzikira kusvika zero kudzivisa torque kuvhunduka kunokonzerwa nekusununguka kumira. Paunenge uchishandisa nyoro kutanga, iyo yekutanga yazvino inowanzo kuita 2 ~ 3 nguva dzeiyo ratidziro yazvino, iyo grid voltage yekuchinja mwero mwero inowanzo kuve mukati me10%, uye kukanganisa kune imwe michina kudiki kwazvo.
Mukuchengetedza kwemazuva ese, teerera kutarisa mamiriro ezvakatipoteredza e kutanga kwakapfava kazhinji. Teerera kuti uone kana paine zvinhu zvakakomberedza iyo nyowani inotanga iyo inodzivirira kufefeterwa kwayo uye kupisa kupisa, uye chengetedza kuti pane nzvimbo yakakwana kutenderedza iyo nyoro starter (inopfuura 150mm), gara uchitarisa kana nzvimbo dzekuparadzira mitsara dzakasununguka, gara uchichenesa iyo guruva kuti ridzivise kukanganisa kupisa kwekupisa uye kudzivirira iyo thyristor kubva kukuvara nekuda kwekunyanyisa tembiricha kukwira. Panguva imwecheteyo, inogona kudzivisa kuvuza uye nenjodzi pfupi dzedunhu dzinokonzerwa neguruva.
Iyo thyristor yakashanda se AC voltage mutemo mune yakapfava yekutanga. Kune low voltage application (yekuisa magetsi: 380V), iyo yekumberi uye yekudzokorora inodzokorora yakatemwa voltage (VDRM, VRRM) inokurudzirwa kusarudza 1200V. Kusvikira pakati voltage voltage (yekuisa magetsi: 660V), iyo yekumberi uye yekudzokorora inodzokorora yakatemwa voltage (VDRM, VRRM) inokurudzirwa kusarudza 2200V kana pamusoro. Kune yakakwira voltage application (yekuisa voltage≥1100V), iyo yekumberi uye yekudzokorora inodzokorora yakatemwa voltage (VDRM, VRRM) inokurudzirwa kusarudza 3500V kana pamusoro. Ku6KV kana 10KV nyoro yekutanga, iyo yakakwira voltage inoda thyristors ive yakafanana yakabatana zvinodzokedzana zvichiteedzana ipapo nhevedzano yekubatanidza. 6KV nyoro Starter inoda 6 thyristors (2 thyristors yakafanana yakabatana zvinodzosera kumashure mumapoka matatu). 10KV nyowani nyowani inoda gumi thyristors (2 thyristors yakafanana yakabatana zvinodzosera kumashure mumapoka mashanu). Yakadaro iyo inomira voltage pane yega thyristor ichave 2000V uye iyo yekumberi / yekudzosera is-inodzokorora yakatemwa magetsi - VDSM uye VRSM ye thyristor yakasarudzwa inofanira kunge inopfuura 6500V.
Runau Electronics inyanzvi yekupa iyo thyristor uye simba module yemanyoro kutanga kunyanya mune yakakwira ikozvino (inopfuura 3000A) uye yakakwira voltage (inopfuura 6000V) kunyorera. Hwakavimbika hunhu uye kugona kwakasimba kunogonesa kushoma kwekudyara kuti vaone kuita kwakanyanya. Iyo yepazasi conductive voltage kudonha, yakasimba pamusoro-yazvino kugona, kukwirira kukanganisa uye voltage kuramba, zvese zvataurwa pamusoro zvivakwa zveRunau thyristor zvinogutsa zvepasirese zvinodiwa zve nyoro starter yakazara application zvakakwana.
Thyristor Sarudzo Kurudzira Reference
(KW / Mu: 380V)
Yakatanga Nyoro Yakashandisa Thyristor (VDRM / VRRM)
Motor Rated Nhasi Ie (A)
Starter Yakapfava Yakashandiswa Thyristor IniTAV (A)
Phase Inodzorwa Thyristor